China India - Ọrụ CRS na Ule | MCM
Reg Usoro ndebanye aha mmanye (CRS)
E wepụtara Ministry of Electronics & Information Technology Eletrọniki & Ozi Teknụzụ Ngwaahịa-Iwu maka Iwu Ndebanye Iwu M- Mara banyere 7Nke Septemba, 2012, ma ọ malitere ịdị na 3rd Ọktọba, 2013. Eletrọniki & Ozi Teknụzụ Ngwaahịa chọrọ maka ndebanye aha mmanye, nke a na-akpọkarị asambodo BIS, ka ana-akpọ CRS registration / certification. Ngwa ahịa eletrọniki niile dị na katalọgụ ngwaahịa ndebanye aha dị na India ma ọ bụ rere ya n'ahịa India ga-edebanye aha na Bureaulọ Ọrụ nke Standkpụrụ India (BIS). Na Nọvemba 2014, etinyere ụdị ngwaahịa 15 a na-amanye edebanye aha. Ngalaba ohuru gunyere: ekwe nti, batrị, ike ike, onunu ike, Ikanam ọkụ na ahịa ọnụ, wdg
TestBIS Battery Test Standard
Nickel sel / batrị: B system 16046 (Nkebi 1): 2018 / IEC62133-1: 2017
Igwe siti / batrị Lithium: B 160 16046 (Nkebi 2): 2018 / IEC62133-2: 2017
Mkpụrụ ego mkpụrụ ego / batrị gụnyere na CRS.
● Anyị lekwasịrị anya na asambodo India maka ihe karịrị afọ 5 ma nyere onye ahịa aka inweta batrị BIS mbụ batrị ụwa. Inyefe ihe gbasara 1000 BIS kwa afọ na nkezi, anyị nwere ahụmịhe bara uru yana nchịkọta akụ siri ike na ngalaba BIS.
● Ndị bụbu ndị isi nke Bureau of Indian Standards (BIS) na-arụrụ ọrụ dị ka onye na-ahụ maka asambodo, iji hụ na arụmọrụ dị mma ma wepu nsogbu nke ịkagbu nọmba ndebanye aha.
Ejiri ike idozi nsogbu niile na asambodo, anyị jikọtara ụmụ amaala India. Companylọ ọrụ alaka ụlọ ọrụ MCM nke India nwere ndị ọkachamara n'ọhịa asambodo, ma na-enwe nkwukọrịta dị mma na ndị isi BIS iji nye ndị ahịa ihe ọmụma na ọrụ ntinye aka kachasị mma, ọkachamara na nke kachasị ikikere.
● Anyị na-eje ozi na-eduga ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ dị iche iche ma nweta ezigbo aha n'ọhịa, nke na-eme ka anyị nwee ntụkwasị obi ma kwado ndị ahịa.
Nke gara aga: Transportgbọ njem- UN38.3
Osote: Vietnam- MIC
Batrị India Crs
Mmanụ Cell Indian Crs
Akwụkwọ Indian Crs
Asambodo Indian Crs
Indian Crs Asambodo Ahịa
Usoro Indian Crs Asambodo
Ọrụ Indian Crs Asambodo
Indian Crs na-ebute oge
Ihe Indian Crs kwuru
Akuko Indian Crs
Indian Crs chọrọ
Nkọwapụta Indian Crs
Akwụkwọ Indian Technical Crs
Indian Crs Nka na ụzụ chọrọ
Nnwale Indian Crs
Ihe Indian Crs Ule
Testzọ Ule Indian Crs
Akụkọ Indian Crs Test
Clọ nyocha Ule Indian Crs
Indian Crs Ule Ule
Ọrụ Indian Crs Testing
Oge Indian Crs Ule
Onyeisi Indian C